(Dhageyso) Taliyaha ciidanka Kumaandooska Puntand oo raali gelin ka bixiyay ciidankii gadooday. | puntlandi.com
(Dhageyso) Taliyaha ciidanka Kumaandooska Puntand oo raali gelin ka bixiyay ciidankii gadooday.
(Pi Garowe) Taliyaha ciidanka Komaandooska Puntland Kornayl Jimcaale Jamac (Takar) ayaa raali gelin buuxda dowladda Puntland iyo shacabkeeda ka siiyay ciidankii Komaandooska ee sameeyay gadoodka ciidan, kuwaas oo qabsaday kantaroolka koonfureed ee magaalada Garowe.
Taliyaha kumaandoooska oo ka hadlayay kulan maanta ciidamada dib loogu celinayay xerooyinkoodii ayaa dhinaca kale beeniyay in ciidanka kumaandoosku ay u dhamaadeen falkaan dhacay, wuxuu sidoo kale beeniyay in arrimo siyaasad ay la xiriirto gadoodkaas ciidan.
Ugu dambayn, wuxuu sheegay taliyuhu in arrinta si guul ah lagu dhameeyay oo ciidamadana lagu amray inay dib ugu xoroodaan saldhigyadoodii hore, wixii kaloo tabasho ahna ay dowladda go’aan ka gaarayso.
Halkaan ka dhagyeso codka taliyaha.